काठमाडौंमा गाई जल्दा बुटवलका किसानको मन पोल्यो
Thu, Apr 19, 2018 | 16:58:07 NST
12:12 PM ( 10 months ago )
काठमाडौं सुन्दरीजलको गाई फार्ममा असार ३ गते लागेको आगोले ६० वटा भन्दा धेरै गाई मरे । त्यो आगोले ६० भन्दा धेरै गाइको ज्यान जाने र २५ वटा दुहुना गाई घाइते मात्रै बनाएन घटना सुन्ने धेरैलाई अत्यन्तै दुःखी पनि बनायो ।
दुहुना गाई र गर्भवती गाई आगोको रापमा छट्पटाएर प्राण त्यागेको दृष्यले हेर्ने जो कोहीको पनि मन पोल्यो । तर सबैभन्दा धेरै मन उनीहरुको पोल्यो, जसले ओम कृषि फार्ममा जस्तै आफैले स्याहार सुसार गरेर गाई पालेका थिए ।
बुटवलमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो गाई फार्म लुम्विनी प्रडक्ट्स एन्ड रिसर्च सेन्टर सञ्चालन गरेका शशी पौडेल पनि काठमाडौं सुन्दरीजलको घटनाबाट स्तब्ध हुनुभयो । सुन्दरीजलमा जलेका गाईका फोटाले आफ्नो फार्ममा भएका झण्डै ५ सय गाईको झल्को आउँछ ।
ठूलो संघर्ष गरेर पालेका गाई एकैछिनमा सुकुटीमा परिणत भएको दृष्यले सबै किसानले सचेतता अपनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । सुन्दरीजल घटना, गाईपालनमा सजिला अप्ठ्यारा लगायतका विषयमा देशकै सबैभन्दा ठूलो गाई फार्म लुम्विनी प्रडक्ट्स एन्ड रिसर्च सेन्टरका प्रमुख शशी पौडेलसँग अर्जुन पोख्रेलले कुराकानी गर्नुभएको छ ।
तपाईंले पनि झण्डै ५ सय गाई पाल्नुभएको छ, काठमाडौं सुन्दरीजलको गाई फार्ममा लागेको घटनाले कत्तिको दुःखी बनाएको छ नि ?
वास्तवम एउटा व्यक्तिका लागि त्यहाँभन्दा ठूलो क्षति त अर्को हुँदैन । घटना भएको केहीबेरपछि मैले विभिन्न मिडियामा समाचार हेरेँ । ती गाई जलेका, छटपटाएका, ड्वाँड्वाँ रोएका दृष्य त मैले देख्नै सकिन ।
सुन्दरीजलमा मरेका गाईका फोटो हेर्दा बुटवलका मेरा फार्मका गाइको यादले निकै सतायो । एउटा गाई चाहिँ सेनाको नजिकै गएर उभ्भिएको थियो तर उसको पूरै शरीर जलेको थियो, त्यो दृष्य त झनै मन खाने थियो ।
गाईपालनमा व्यावसायिकतासँगै मानवियता पनि जोडिएको रहेछ है ?
मैले भनिहालेँ मायाकै कारणले मैले फोटो पनि हेर्न सकिन । बरु मान्छे जलेको हेर्न सकिन्छ अबोध पशु जलेको हेर्न सकिन्न । गाई माता र आमासँग पनि जोडिएको हुन्छ त्यसले पनि मलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । एउटा गाई तलमाथि हुँदा आफ्नै परिवारको सदस्य तलमाथि परेजस्तो लाग्छ ।
यो घटनाले दुःखी त सबैलाई बनायो, तर गाई पालक किसानलाई त सचेत पनि त गरायो होला नि ?
हो, यो घटनाले दुःखसँगै चेतना पनि दिएको छ । करौडौं रुपैयाँको लगानीमा गाईपालन गर्ने तर सानातिना कुरालाई ध्यान नदिँदा कत्रो क्षति र कस्तो विभत्स दृष्य देख्नुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश हामीले पाएका छौं । पहिलो कुरा त हामीले गाई फार्ममा प्लाष्टिकका सामग्री प्रयोग गर्नै नहुने रहेछ । चाहे त्यो छानो होस या उनीहरु बस्ने भुँइ त्यहाँ पलाष्टिकका सामग्री प्रयोग गर्नै नहुने रहेछ ।
अर्को कुरा गाईलाई दिने पराल र दाना गोठबाट टाढै राख्नुपर्ने रहेछ । गाईको गोठ अग्लो हुनुपर्छ । त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण कुरा गाइलाई गोठमा बाँधेर राख्नै हुन्न, भिन्दै संरचना बनाएर नबाधे पनि हुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । फार्मको नजिकै ठूला ठूला ट्यांकी राख्नुपर्छ ।
सुन्दरीजलमा त्यतिछिटो आगो फैलनुमा गाईलाई प्लाष्टिकको म्याट बिच्छाएको र छानो पनि प्लाष्टिककै भएकाले हो भन्नुभयो, यस्ता सामग्री नराख्दा त तापक्रम नमिल्ने होला नि है ?
होइन । नेपालमा उतिसारो जाडो र गर्मी हुँदैन । हामीकहाँ पालिएका होलिस्टिन जर्सी लगायतका गाई माइनस डिग्री सेल्सियल्समा नै हुर्कने गाई हुन् । गाईलाई चिसो लाग्ला भनेर उतिसारो चिन्ता लिनुपर्ने त म देख्दिन ।
देशकै सबैभन्दा ठूलो गाईपालकका हिसाबले गाई पालिरहेका किसान र गाईपालनमा लाग्न चाहने किसानलाई के भन्नुहुन्छ नि ?
यहाँ सुझाव दिएर कसैले मनन पनि गर्दैनन् र त्यसरी पार पनि लाग्दैन् । मैले भन्दा पनि राज्यले नितीगत रुपमा ठूलो सुधार गर्‍यो भने मात्रै यस्ता समस्या आउँदैनन् र आए पनि किसानले राहत पाउँछन् । यो कुरा किताब पढाएर जानिने कुरा होइन, यो त व्यवसाय गर्दै जाँदा जानिने कुरा हो ।
अर्को कुरा पशुपालनमा मान्छेले मान्छेलाई सिकाउने भन्दा पनि पशुले मान्छेलाई सिकाउँछन् । पशुपालनका क्रममा तिनै गाईभैँसी, गाई बाख्रा सबैले हामीलाई सिकाउने हो । पशुप्रति बफादार भैदिनुहोस, उनैले सिकाउँछन् । बाहिर किताब पढेर मेरा बाबै भनेर हुने केही होइन । पशुले खोजेको कुरा हामीले गरिँदिदा सफल भइन्छ ।
व्यवसायका क्रममा यस्ता विपत्ति आएभने सरकारी सहायता र विमावाततको क्षतिपूर्ति पाउन कत्तिको गाह्रो छ ?
हाम्रो देशमा गफ मात्रै धेरै हुन्छ काम हुँदैन् । सिंहदरबारमा थन्किएका फाइलमा हेर्नेहो भने नेपालका किसान विश्वकै सुविधासम्पन्न रुपमा पेशा गरिरहेका छन् । तर वास्तविकता भने धेरै फरक छ ।
धितो राखेर पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले तोकेकै ऋण लिन त मुश्किल छ भने विपदपछिको सहायता त परैको कुरा भयो । त्यसैले आफ्नो व्यवसायमा ध्यान दिने हो, सरकारी अनुदान र सहायता त पहुँचमा हुनेले मात्रै पाउँछन् ।